सबै कुरा तपाईलाई ऊर्जा आत्म उपभोगको बारेमा जान्नु आवश्यक छ हरियो नवीकरणीय
सबै कुरा तपाईलाई ऊर्जा आत्म खपतको बारेमा जान्नु आवश्यक छ
जर्मन पोर्टिलो | | नवीकरणीय ऊर्जा
त्यहाँ धेरै व्यक्ति छन् जो बिजुली ग्रिडबाट बिच्छेदन गर्न, नवीकरणीय उर्जामा शर्त लगाउँछन् र आत्म खपत प्रयोग गर्छन्। तपाईंले बिजुली ग्रिड र यसको उच्च मुल्यमा निर्भर बिना तपाईंको घरमा बिजुली उत्पादन गर्नुहोस्।
यो एक धेरै राम्रो विचार हो आफ्नो आफ्नै उपभोग गर्न चाहानुहुन्छ, तर यसलाई ध्यानमा राख्नु पर्छ केहि दिशानिर्देश अनुसरण गर्न आत्म उपभोग कानून। के तपाईं सबै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षहरू जान्न चाहनुहुन्छ जुन तपाईंले आफ्नो उपभोगको आनन्द लिनु पर्छ?
1 तपाईंसँग नवीकरणीय उर्जा हुनु आवश्यक छ?
1.1 सौर प्यानल वा साना पवन चक्कीहरू
1.2 चार्ज, इन्भर्टर र ब्याट्री को लागी कन्ट्रोलर
2 नवीकरणीयहरूमा भर पर्दै
3 स्वयं उपभोग कानून र सोल कर
4 स्वयं खपतको नाफा
5 इलेक्ट्रिक आत्म उपभोग
तपाईंसँग नवीकरणीय उर्जा हुनु आवश्यक छ?
सौर प्यानल वा साना पवन चक्कीहरू
आत्म उपभोग गर्न, प्राथमिकता हो आफैले ऊर्जा उत्पन्न गर्न आवश्यक पूर्वाधारहरू छन्। त्यो हो, तपाइँको जमिनमा नवीकरणीय उर्जा स्थापना गर्न सक्षम हुनु ताकि यो सफा हो र लगानी मध्यम अवधिमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले विद्युतीय नेटवर्कबाट पूर्ण स्वतन्त्रता पाउनको लागि अलग गर्नुपर्दछ। त्यो हो, पूरै विद्युतीय रूपमा पृथक र आत्मनिर्भर।
यसको लागि तपाईंलाई सौर्य प्यानेल वा सानो वायुमिलहरू आवश्यक छ। आज आत्म-उपभोगको लागि सब भन्दा शक्तिशाली उर्जा सौर प्यानलहरू हुन्। यसको लगानी लागत कम र कम हुँदै गइरहेको छ र उत्पादित उर्जाको मात्राले बजारमा अधिक प्रतिस्पर्धात्मकता निम्त्याउँछ।
थप रूपमा, स्पेन एउटा देश हो जहाँ जलवायुलाई धन्यवाद, घमाइलो समय धेरै प्रशस्त छन्। सौर्य प्यानलहरूको एक ठूलो फाइदाहरू यो हो कि तिनीहरूको स्थापना एकदम सरल छ र धेरै जग्गा लिने छैन, किनकि तिनीहरू छतमा राख्न सकिन्छ।
मिनी-वायु उर्जालाई अलि बढी भूमि आवश्यक पर्दछ र केही अधिक जटिल स्थापना आवश्यक छ, तर यदि तपाईं त्यस्तो ठाउँमा बस्नुहुन्छ जहाँ बतास निरन्तर चलिरहन्छ र मध्यम-उच्च तीव्रताका साथ, तपाईं यो उर्जाको लागि विकल्प लिन सक्नुहुन्छ।
चार्ज, इन्भर्टर र ब्याट्री को लागी कन्ट्रोलर
ब्याट्रीको माध्यमबाट कोरिएको हालको नियन्त्रण गर्न तपाईंलाई चार्ज नियामक चाहिन्छ। यो आवश्यक छ यदि हामी यसलाई बढी गरम हुनबाट रोक्न चाहन्छौं र केही दुर्घटना हुन सक्छ। यदि हामीसँग ऊर्जा भण्डारण गर्न ब्याट्री छैन भने हामीलाई नियामकको आवश्यक्ता पर्दैन।
इन्भर्टर त्यो हो जुन प्रत्यक्ष वर्तमानलाई वैकल्पिक वर्तमानमा रूपान्तरण गर्दछ।
ब्याट्रीहरू हुनु महत्त्वपूर्ण छ जुन सौर्य प्यानलहरूले उत्पन्न गरेको ऊर्जाको भण्डारन गर्नका लागि यसलाई उत्पादन नगरीएको हो वा यसको उत्पादन कम छ भने (बादल दिन, रातमा, उपभोग उत्पन्न भएको उर्जा भन्दा बढी हुन्छ)।
यो उल्लेख गर्नुपर्दछ कि ब्याट्री सम्पूर्ण स्थापनाको सब भन्दा महँगो तत्व हो, जुन सौर प्यानल र वायु टर्बाइनको २--वर्ष उपयोगी जीवनको तुलनामा, ब्याट्रीहरुमा केवल १ 15 बर्षको शेल्फ लाइफ हुन्छ।
नवीकरणीयहरूमा भर पर्दै
यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि यदि हामी बिजुली ग्रिडबाट विच्छेदन गर्न चाहन्छौं, हामीले यो जान्नुपर्दछ कि हामी नवीकरणीयहरू र उनीहरूको नकारात्मक पक्षहरूमा भर पर्दछौं। त्यो हो, सूर्य वा बतास भएसम्म हामीसँग उर्जा छ। तथापि, रातमा, वर्षाको दिनमा वा हावा नभएको बेलामा, हाम्रो शक्ति बिर्सिएन।
हामी जति स्वायत्तता चाहन्छौं, त्यति नै पैसा हामीले ब्याट्रीमा लगानी गर्नुपर्दछ। हामी बसोबास गर्ने स्पेनको क्षेत्रको आधारमा, हामीसँग लगभग एक हप्ताको आँधीबेहरी आउन सक्छ जसले सौर्य ऊर्जा रोक्न सक्छ। अर्कोतर्फ, हावा टर्बाइनहरू २०m / s बतास मुनि काम गर्न रोक्नुहोस्। तसर्थ, यो सक्रिय हुन र ब्याट्री मा अतिरिक्त लगानी गर्न को लागी आवश्यक छ कि यी प्रकारको स्थितिको लागि ऊर्जाको भण्डारणमा मद्दत गर्दछ।
नवीकरणीय र आत्म उपभोगको लागि उर्जा भण्डारण सबैभन्दा ठूलो समस्या हो।
स्वयं उपभोग कानून र सोल कर
जब आत्म-उपभोगको बारेमा कुरा गर्छौं, सूर्य कर सँधै बाहिर आउँदछ। जे होस्, सबै सुविधाहरू जससँगa१०kW भन्दा कम पावरले केहि भुक्तान गर्नु हुँदैन। यदि हामीसँग विद्युत उपभोक्ता पूर्ण रूपमा बिजुली ग्रिडबाट टाढा छ भने, हामीले केहि पनि तिर्नु पर्दैन। अर्कोतर्फ, यदि हामीसँग स्व-उपभोग गरिरहनु भएको छ, तर हामी सञ्जालमा जडित छौं भने हामीले कुनै पनि नेटवर्क ग्राहकको रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ, तर घाममा कर सहित जबसम्म तपाईको उपभोग सम्झौताको पावर भन्दा बढी हुन्छ। हामीसँग छ।
अब म तपाईंलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा देखाउँदै छु तपाई आत्म खपत कानून को बारे मा थाहा पाउनु पर्छ:
यदि तपाई नेटवर्कमा हुनुहुन्न भने तपाईले केहि पनि भुक्तान गर्नुपर्दैन, त्यो हो, यदि तपाईसँग पूर्ण रूपमा एक्लोप्टेन्ट आत्म खपत छ भने।
यसको विपरित, यदि तपाईंसँग आत्म-उपभोग छ तर बिजुली ग्रिडमा हुनुहुन्छ भने, निम्न घटनाहरू हुनेछन्:
यदि तपाईं आफ्नो करारको पावर अनुसार बिजुलीको खपत भन्दा बढी गर्नुहुन्छ भने तपाईंले डिस्चार्ज गरिएको अतिरिक्त उर्जाको लागि शुल्क तिर्नु पर्नेछ।
तपाईको स्थापनामा १० किलोवाट भन्दा कम शक्ति छ भने तपाईले केहि भुक्तानी गर्नुहुने छैन, यदि तपाई क्यानरी टापु, सेउटा र मेलिल्लाबाट हुनुहुन्छ भने तपाईको स्थापना कोगेरेसन र ट्रेन ब्रेकि forका लागि हो (यो २०२० मा समाप्त हुन्छ) र तपाईसँग कम कर हुनेछ यदि तपाईं मेनोर्का वा मल्लोर्काबाट हुनुहुन्छ।
यदि तपाईंको उपभोग शक्ति भन्दा बढि छ तपाईंले सम्झौता गर्नुभयो तपाईंले ०. 0,5 यूरो / मेगावाट र and% उत्पादन कर तिर्नु पर्छ। थप रूपमा, उपभोग गरिएको उर्जाको सम्बन्धमा सहायक सेवाहरूका लागि शुल्कहरू छन्।
यी करहरू केवल फोटोभोल्टिक सौर प्यानलहरूमा लागू हुन्छन् (त्यसैले तथाकथित सूर्य कर)। जहाँसम्म, फोटोभोल्टिक सौर प्यानलको विकल्पको रूपमा हामीसँग थर्मल सौर प्यानलहरू हुन सक्छन्। तिनीहरू पानी ताप्न सूर्य को ऊर्जा को फाइदा लिन र तिनीहरू मा कुनै कर छैन।
मिनी-वायु उर्जा यो कर छुट छ।
स्वयं खपतको नाफा
एक आत्म उपभोग स्थापनाको नाफा को लागी धेरै कुराहरुको आवश्यक पर्दछ। सबैभन्दा लाभदायक विकल्प भनेको एक बर्षको शुद्ध ब्यालेन्स हुनु हो, तर स्पेनमा यो अझै सम्भव छैन। यद्यपि हामी बिजुली बिलमा धेरै बचत गर्न सक्छौं।
उदाहरण को लागी, यदि हाम्रो घर प्रति वर्ष 5000 किलोवाट खपत गर्छ र हामीसँग 2,5kWp ब्याट्री को साथ सौर प्यानल को स्थापना छ, हामी बिजुली बिलको परिवर्तनशील भाग बचत गर्न सक्छौं।
स्पेनको क्षेत्रमा निर्भर गर्दछ जहाँ हामी नवीकरणीय उर्जा स्थापना गर्छौं, यो अधिक वा कम लाभदायक हुनेछ। कर्डोबामा छतमा रहेको सौर प्यानल ओभिडोमा भएको जस्तो छैन, उदाहरणका लागि। के आश्वासन दिन सकिन्छ कि छ -8-१० वर्षको मामलामा स्थापना पूर्ण रूपमा परिणत हुनेछ। यदि हामीले ध्यानमा राख्यौं कि स्थापनाले २० भन्दा बढि समय सम्म लिनेछ, मध्यम र लामो अवधिमा आत्म-उपभोगमा शर्त लगाउनु फाइदाजनक हुनेछ, आफ्नै १००% नवीकरणीय उर्जा उत्पादन गर्न।
इलेक्ट्रिक आत्म उपभोग
त्यहाँ धेरै व्यक्ति छन् जसले स्पेनको बिजुलीको मूल्य बढ्दो रूपमा दिएर विद्युत खपतमा शर्त लगाइरहेका छन्। पोर्चुगल पछि, हामी सबै यूरोप मा सबै भन्दा माथि बिजुली मूल्यहरु छ। यस कारणले, नवीकरणीय उर्जाहरूको सहयोगमा हामी विद्युतीय नेटवर्कबाट स्वतन्त्र हुनको लागि विद्युतीय आत्म उपभोग गर्न सक्दछौं।
बिजुली स्वयं उपभोग संग हामी नवीकरणयोग्य ऊर्जाको परिणाम स्वरूप तताउने, तातो पानी, विद्युतीय उपकरणहरू र घरेलु उपकरणहरूको लागि हाम्रा आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्षम हुनेछौं। उच्च प्रदर्शनको लागि, यो राम्रो ऊर्जा भण्डारण हुनु महत्वपूर्ण छ, किनकि नवीकरणीयहरू बीच-बीचमा हुन्छन् (विशेष गरी मिनी-वायु)। हामी बसोबास गर्ने स्पेनको क्षेत्रमा निर्भरता, तपाईं बिजुली ग्रिडबाट स्वतन्त्र खपत पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुन सक्नुहुन्छ वा छैन। यो पूर्ण रूपमा चरमा निर्भर गर्दछ जस्तै कि हावाको शक्ति, आवृत्ति जससँग यो उड्दछ, घामको घण्टा, क्लाउडनेस इत्यादि।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, स्व-उपभोगका यसको फाइदा र सीमितताहरू छन् र घरमा यसलाई स्थापित गर्नु अघि तपाईंले आफ्नो सम्भाव्यता राम्ररी जान्नुपर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: हरियो नवीकरणीय » नवीकरणीय ऊर्जा » सबै कुरा तपाईलाई ऊर्जा आत्म खपतको बारेमा जान्नु आवश्यक छ